အာမုတ် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / အာမုတ်
1:2 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: The Lord will roar from Zion, and from Jerusalem he will utter his voice. And the beautiful pastures have mourned, and the top of Carmel has become dry.
1:3 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Damascus, and for four, I will not convert it, in so far as they have threshed Gilead into iron wagons.
1:5 And I will shatter the crowbar of Damascus, and I will destroy the inhabitants of the camp of the idol and the holder of the scepter of the house of pleasure; and the people of Syria will be transferred to Cyrene, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
1:6 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Gaza, and for four, I will not convert it, in so far as they have carried out an excellent captivity, so as to enclose them in Idumea.
1:8 And I will destroy the inhabitant from Ashdod, and the holder of the scepter of Ashkelon. And I will turn my hand against Ekron, and the remainder of the Philistines will perish, သခင်ဘုရားသည်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏.
1:9 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Tyre, and for four, I will not convert it, in so far as they have completed an excellent captivity in Idumea and have not considered the bond among brothers.
1:11 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Edom, and for four, I will not convert him, in so far as he has been pursuing his brother with the sword and has outraged his brother’s compassion, and he has gone beyond his anger and has held onto his indignation until the end.
1:13 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of the sons of Ammon, and for four, I will not convert him, in so far as he has cut up the pregnant women of Gilead, so as to expand his limits.
1:15 And Melchom will go into captivity, he and his leaders together, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
2:1 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Moab, and for four, I will not convert him, in so far as he has burned the bones of the king of Idumea, all the way to ashes.
2:3 And I will destroy the judge in their midst, and I will execute all his leaders with him, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
2:4 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Judah, and for four, I will not convert him, in so far as he has rejected the law of the Lord and has not kept his commandments. For their idols, which their fathers followed, have deceived them.
2:6 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: For three wicked deeds of Israel, and for four, I will not convert him, in so far as he has sold the just for silver and the poor for shoes.
2:11 And I stirred up prophets from your sons, and Nazirites from your young men. Is it not so, ဣသရေလအမျိုး၏အမြိုးသားတို့, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ?
2:12 Yet you would offer wine to the Nazirites, and you would command the prophets, ဟုဆို: “Do not prophesy.”
2:13 အကယ်, I will creak under you, just asawagon creaks that is laden with hay.
2:16 And the stout of heart among the strong will flee away naked in that day, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
3:1 Listen to the word which the Lord has spoken about you, ဣသရေလအမျိုး၏အမြိုးသားတို့, concerning the whole family that I led out of the land of Egypt, ဟုဆို:
3:2 I have known only you in suchaway, out of all the families of the earth. ဒီအတွက်ကြောင့်, I will visit upon you all your iniquities.
3:9 Let it be heard in the buildings of Ashdod and in the buildings of the land of Egypt, ဆိုရမည်: Gather together across the mountains of Samaria, and see the many absurdities in its midst, and those who are suffering false accusations in its inner most places.
3:10 And they do not know how to make it right, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, storing up iniquity and plunder in their buildings.
3:11 ထိုအမှုကြောင့်, အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: The land will be encircled and squeezed together. And your strength will be drawn away from you, and your buildings will be torn apart.
3:12 အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: Just as ifashepherd had rescued two legs from the mouth ofalion, or the tip of an ear, so also will the sons of Israel be rescued, who dwell in the sick bed of Samaria, and in the cot of Damascus.
3:15 And I will strike the winter house with the summer house; and the houses of ivory will perish, and many buildings will be torn apart, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:2 The Lord God has sworn in his holiness: ကှ္ဂျကှ္ဂျ, the days that will overcome you and that will impale you on poles, and that will place what remains of you in boiling pots.
4:3 And you will go out through the breaches, one over another, and you will be cast out into Harmon, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:5 And offerasacrifice of praise with leaven. And call for voluntary oblations, and announce it. For such is your will, ဣသရေလအမျိုး၏အမြိုးသားတို့, သခင်ဘုရားသည်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏.
4:6 ထို့ကြောင့်, ဒီအတွက်ကြောင့်, I have given you dull teeth in every one of your cities, andalack of bread in all your places. And you have not been turned back towards me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:7 ထို့ကြောင့်, I have withheld the rains from you, when there were still three months left until the harvest. And I rained on one city, and I did not rain on another city; one part was rained on, and the part on which I did not rain, dried out.
4:8 And two and three cities went to one city, in order to drink water, and they were not satisfied. And you did not return to me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:9 I struck you withaburning wind and with yellowing; the caterpillar has consumed your many gardens and your vineyards, your olive groves and your fig groves. And you did not return to me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:10 I sent death to you by way of Egypt; I struck your youths with the sword, even bringing captivity to your horses. And I made the stench of your camp ascend into your nostrils. And you did not return to me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:11 I overturned you, just as God overturned Sodom and Gomorrah, and you became like an ember seized from the fire. And you did not return to me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
4:12 ဒီအတွက်ကြောင့်, I will do these things to you, ဣသရ. But after I have done these things to you, ဣသရ, be prepared to meet your God.
4:13 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, he who forms the mountains and creates the wind and announces his speech to man, who makes the morning mist and steps over the heights of the earth: the Lord God of hosts is his name.
5:3 အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကား: In the city from whichathousand departed,ahundred will remain, and in that from whichahundred departed, ten will remain, in the house of Israel.
5:6 Seek the Lord and live. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, the house of Joseph may be destroyed with fire, and it will devour, and there will be no one who can extinguish Bethel.
5:8 The Maker of Arcturus and Orion, who turns darkness into daybreak and who changes day into night; who calls forth the waters of the sea and who pours them out over the face of the earth: သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကား.
5:11 ထို့ကြောင့်, on his behalf, because you have torn apart the poor and stolen choice prey from him: you will build houses with square stones and you will not dwell in them; you will plant the most delightful vineyards, and you will not drink wine from them.
5:13 ထို့ကြောင့်, the prudent will be silent at that time, for it is an evil time.
5:14 Seek good and not evil, သငျသညျအသကျရှငျစေခြင်းငှါဒါ. And the Lord God of hosts will be with you, just as you have asked.
5:16 ထို့ကြောင့်, thus says the Lord God of hosts, the Sovereign: In all the streets, there will be wailing. And in every place where they are outdoors, သူတို့ပြောလိမ့်မယ်, “Woe, woe!” And they will call the farmer to mourn, and those who know mourning to lamentation.
5:17 And in all the vineyards there will be wailing. For I will cross through your midst, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
5:19 It is as ifaman flees from the face ofalion, only to haveabear meet him; သို့မဟုတ်, he entersahouse and leans with his hand against the wall, only to haveasnake bite him.
5:27 And I will cause you to go into captivity across Damascus, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ. The God of hosts is his name.
6:7 ဒီအတွက်ကြောင့်, now they will depart at the head of those who go into captivity; and the faction of the lustful will be removed.
6:12 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, the Lord has commanded, and he will strike the greater house with catastrophes, and the lesser house with divisions.
6:14 You rejoice in emptiness. သငျသညျပွောဆို, “Have we not, by our own strength, taken horns for ourselves?"
6:15 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, house of Israel, I will raise upapeople over you, says the Lord God of hosts, and they will crush you from the entrance of Hamath all the way to the burning of the desert.
7:1 These things the Lord God has revealed to me. ထိုအခါ, the locust was formed at the beginning of the germination during the latter rains, အကယ်စင်စစ်, the latter rains came after the thundering of the king.
7:2 ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, when they had finally eaten all the grass in the land, that I said, "ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်, be gracious, တောင်းပန်ပါတယ်. Who will raise up Jacob, for he is little?"
7:4 These things the Lord God has revealed to me. ထိုအခါ, the Lord God called for judgment unto fire, and it devoured the manifold abyss, and it consumed simultaneously in every direction.
7:5 ထိုအခါငါကပြောသည်, "ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်, cease, တောင်းပန်ပါတယ်. Who will raise up Jacob, for he is little?"
7:7 These things the Lord revealed to me. ထိုအခါ, the Lord was standing nearaplastered wall, and in his hand wasamason’s trowel.
7:8 ထိုသခင်ဟုငါ့အားပြောဆို၏, "သင်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြပါ, အာမုတ်?"ထိုအခါငါကပြောသည်, “A mason’s trowel.” And the Lord said, "အကယ်, I will place the trowel in the midst of my people Israel. I will no longer plaster over them.
7:10 And Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam king of Israel, ဟုဆို: “Amos has rebelled against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to withstand all his sermons.
7:12 အာမဇိအာမုတ်ဖို့ကဆိုပါတယ်, "သင်, ပရောဖက်, ထွက်. ယုဒပြည်သို့ပြေး, ထိုအရပ်၌မုန့်ကိုစား, နှင့်ပရောဖက်ပြုရှိ.
7:13 ဗေသလအရပ်ထဲမှာ, မဆိုကြာကြာပရောဖက်ပြုကြဘူး, ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရင်၏သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သောကြောင့်, ထိုသို့နိုငျငံတျော၏အိမျတျောဖြစ်၏။ "
7:14 နှင့်အာမုတ်တုံ့ပြန်, သူ Amasias အားဆို၏, "ငါသည်ပရောဖက်ကိုငါမ, ငါပရောဖကျ၏သားမဖြစ်ကြောင်းကို, ငါမူကားရိုင်းသောသင်္ဘောသဖန်းပင်တပင်ကနေအသီးအနှံကိုဆွတ်တိရိစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းဖြစ်ကြောင်းကို.
7:15 ထိုအခါထာဝရအရှင်ငါ့ကိုယူ, ငါသိုးစုကိုအောက်ပါအခါ, နှင့်သခင်ငါ့အားပြောဆို၏, '' Go ကို, ငါ၏လူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးတွင်ပရောဖက်ပြု။ ' "
7:16 နှင့်ယခု, hear the word of the Lord: သငျသညျပွောဆို, “You will not prophesy about Israel, and you will not rain your words upon the house of the idol.”
8:1 These things the Lord has revealed to me. ထိုအခါ,ahook to draw down fruit.
8:2 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "သင်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြပါ, အာမုတ်?"ထိုအခါငါကပြောသည်, “A hook to draw down fruit.” And the Lord said to me, “The end has come for my people Israel. I will no longer pass through them.”
8:3 And the hinges of the temple will creak in that day, သခင်ဘုရားသည်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏. Many will die. Silence will be thrown away in all places.
8:4 ဒီနားထောငျ, သငျသညျအဘယ်သူသည်ဆင်းရဲသောသူကိုနှိပ်စက်သူမပါဘဲလုပ်ဖို့မြေယာ၏လိုအပ်ချက်အတွက်သူတို့အားလုပ်.
8:5 သငျသညျပွောဆို, "အခါလ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကကျော်ဖွစျလိမျ့မညျ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းသို့ရောင်းချနိုင်, နှင့်ဥပုသ်နေ့, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကစပါးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်: ကျနော်တို့တိုင်းတာလျော့ကျစေခြင်းငှါအမိန့်ရှိ, နှင့်စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်, နှင့်လှည့်ဖြားကြေးခွံအစားထိုး,
8:6 ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံနှင့်အတူခိုကိုးရာမဲ့အပိုင်စေခြင်းငှါအမိန့်ရှိ, နှင့်ရှူးဖိနပ်တရံသည်ဆင်းရဲသား, နှင့်ဘောဇဉ်တည်းဟူသောမစင်ရောင်းချစေခြင်းငှါ?"
8:7 သခင်ဘုရားသည်ယာကုပ်အမျိုး၏မာနအားဖြင့်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်: ငါမေ့လျော့တော်မမူမည်, ပင်အဆုံး, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အကျင့်ကိုကျင့်.
8:9 ထိုသို့ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်, သခင်ဘုရားသည်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏, နေရောင်ကိုမွန်းတည့်အချိန်၌ကျဆင်းလိမ့်မည်ဟု, ငါအလင်း၏နေ့၌မြေကြီးပေါ်မှာမှောင်မိုက်ဖြစ်စေမည်.
8:10 ထိုအခါငါစိတ်မသာညည်းတွားသို့သင်တို့၏ပွဲတော်များကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, မြည်တမ်းခြင်းသို့အပေါင်းတို့နှင့်သင်တို့၏ဓမ္မသီချင်း. ထိုအခါငါသည်သင်တို့၏ကျော၏အသီးအသီးကိုကျော်လျှော်တေအဝတ်ကိုတင်ထားတော်မူမည်, နှင့်တိုင်းခေါင်းပေါ်မှာဆံပင်မရှိ. ထိုအခါငါတစ်ဦးသာတစ်ပါးတည်းသောသားအဘို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းသကဲ့သို့စတင်မည်, တစ်ခါးသီးသောနေ့ကဲ့သို့ကဖြည့်စွက်.
8:11 အကယ်, လက်ထက်၌ pass တ, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, ငါမြေကြီးပေါ်မှာအစာခေါင်းပါးသောအခါစလှေတျမညျ: မုန့်ကိုမအစာခေါင်းပါးသောအခါ, မဟုတ်ရေငတ်ရေများအတွက်, ဒါပေမယ့်သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာဘို့.
8:12 ထိုသူတို့ကပင်လယ်မှပင်ပင်လယ်မှရွှေ့မည်, နှင့်မြောက်ကိုရီးယားထံမှအပေါင်းတို့သည်လမ်းအရှေ့ဘက်မှ. သူတို့ဟာသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာဖွေလျက်ပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်လိမ့်မယ်, သူတို့မတှေ့ကွလိမျ့မညျ.
8:13 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, beautiful virgins, and young men, will fail because of thirst.
8:14 They swear by the offense of Samaria, နှင့်သူတို့ပြော, “As your God lives, Dan,” and “The way of Beer-sheba lives.” And they will fall, and they will not rise up any more.
9:1 I saw the Lord standing over an altar, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: “Strike the hinges, and let the lintels be shaken. For there is avarice at the head of them all, and I will execute the very last of them with the sword. There will be no escape for them. They will flee, and he who flees from among them will not be saved.
9:6 He establishes his ascension into heaven, and he has founded his bundle on the earth. He calls the waters of the ocean, and pours them over the face of the earth. သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကား.
9:7 Sons of Israel, are you not like the sons of the Ethiopians to me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ? Did I not cause Israel to rise up out of the land of Egypt, and the Philistines out of Cappadocia, and the Syrians out of Cyrene?
9:8 အကယ်, the eyes of the Lord God are on the sinning kingdom, and I will wipe it from the face of the earth. Though truly, when destroying, I will not wipe away the house of Jacob, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
9:9 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, ငါအမိန့်တော်ပါလိမ့်မယ်, and I will sift the house of Israel among all the nations, as wheat is sifted inasieve. And not even one small stone will fall to the ground.
9:10 All the sinners of my people will die by the sword. သူတို့ကပြောပါ, “Disaster will not come near us, and it will not overcome us.”
9:11 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ငါဒါဝိဒ်၏တဲဆောကျမညျ, အရာလဲပြီ. ထိုအခါငါက၎င်း၏ရိုးကိုအတွက်တော်ပြိုပျက်ရာတို့ကိုပြုပြင်လိမ့်မည်, ငါပြိုကျသောအရာပြန်ပေးမည်. ထိုအခါငါကပြန်လည်တည်ဆောက်လိမ့်မည်, ပဲရှေးလကျထကျ၌ရှိသကဲ့သို့,
9:12 သူတို့ယု၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်စေခြင်းငှါဒါ, ငါ့နာမသည်သူတို့အပေါ်မှာမဖြစ်၏ခဲ့, သခင်ဘုရားသည်ဤပြုသောသူကပြောပါတယ်.
9:13 အကယ်, လက်ထက်၌ pass တ, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, နှင့် plower စပါးရိတ်ရာကာလမှီပါလိမ့်မယ်, နှင့်စပျစ်သီးနယ်အမျိုးအနွယ်၏မျိုးစေ့ကြဲမှီပါလိမ့်မယ်. တောင်ချိုယိုလိမ့်မည်, ခပ်သိမ်းသောတောင်ကုန်းစိုက်ပျိုးလိမ့်မည်.
9:14 ငါသည်ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောပြန်လှည့်ပါလိမ့်မယ်. ထိုသူတို့သညျတောမြို့များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သူတို့နှင့်အတည်လိမ့်မည်. ထိုသူတို့စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်နဲ့သူတို့ရဲ့စပျစ်ရည်ကိုသောက်ကြလိမ့်မည်. ထိုသူတို့ကဥယျာဉ်များဖန်တီးပေးရန်နှင့်၎င်းတို့၏အသီးကိုစားလိမ့်မည်.
9:15 ထိုအခါငါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မြေပေါ်တွင်သူတို့ကိုစိုက်ထားမည်. ထိုအခါငါမရှိတော့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထဲကသူတို့ကို root လိမ့်မည်, သောသူတို့ကိုငါပေးပြီ, သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.